बल्ल खुल्यो यस्तो खतरनाक रहस्य, ओलीको निर्देशनमा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले यतिसम्म गरे — Imandarmedia.com
बल्ल खुल्यो यस्तो खतरनाक रहस्य, ओलीको निर्देशनमा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले यतिसम्म गरे
काठमाडाैं । पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याएका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
मधेसका जनताको मुद्दा उठाउँदै आएका पार्टीहरु एक हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो सपना पूरा भएको भन्दै यादवले खुशी प्रकट गरेका हुन् । पार्टी एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि सांसद यादवले भने, ‘मेरो सपना थियो, त्यो साकार भएको छ, आजको दिनमा तीनवटा पार्टीहरु एक हुनु योभन्दा राम्रो मेरा लागि अरु के होला र ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोज्नुभएको छ भन्दै झुक्याएर गलत मनसायले जनकपुरबाट राति ३ बजे काठमाडौं ल्याइएका सांसदले नेकपाको कब्जाबाट फुत्केपछि हिमालय टिभीलाई दिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया यस्तो छ-
”यो जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि पार्टीभित्रै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । यो किन ल्याउनु भो ? समाजवादी फुटाउन । तर, समाजवादी फुट्ने अवस्था देखिएन । यसमा मलाई पक्कै पनि टार्गेट गरिएको हो । त्यसअनुसार दुईजना नेकपाका माननीय महेश र किसनजी खबर नदिइकन पुग्नुभयो । आइजीपी साहेब (सर्वेन्द्र खनाल) सँग मेरो पहिल्यै देखिको चिनाजानी हो । एमपीसाबहरुसँग पुरानै चिनाजानी । उहाँहरुले खासै कुनै नराम्रो व्यवहार मसँग गर्नुभएको छैन । तर, एकचोटि प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्नैपर्‍यो भन्ने किसिमको दबाव आयो ।
कहीँ न कहीँबाट पार्टीभित्र यस्ता असन्तुष्टिका कुराहरु आएको पक्कै पनि हो । नआएको होइन । तर, हामी अलग्गै जाँदैछौं भनेर मलाई कसैले एप्रोच गरेको छैन । मेरो प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाजीसँग पनि कुराकानी भयो । उहाँ पनि अलिकति असन्तुष्ट पक्कै पनि हुनुहुन्छ । तर, यो पार्टी तोड्न लागेको मैले खासै देखिनँ ।”
हामीले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने १०१ प्रतिशत गलत हो– इस्तियाक राई
पूर्वमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरूले पार्टी फुटाउँछन् भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । समाजवादी पार्टीका ४० प्रतिशत सांसदले पार्टी फुटाउन लागेका हुन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले पाँच दिनदेखि लगातार भन्दै आएको छु हामीले पार्टी फुटाउने सम्भावना १०१ प्रतिशत छैन ।’
पूर्वमन्त्री राई भन्छन्– पार्टीभित्र असन्तुष्टि भएको सत्य हो । यही कारणले पार्टी फुट्ने भए सबैभन्दा पहिला नेकपा फुट्छ, त्यसपछि कांग्रेस, अनि मात्रै हाम्रो पालो आउला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन आफूहरूले आश्वासन नदिएको पूर्वमन्त्री राईको भनाइ छ ।
राईले गत पुस पहिलो साता शहरी विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउने गरेका छन् । आफ्नो पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको भने राईले स्वीकारे । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र असन्तुष्टि भएको सत्य हो । यही कारणले पार्टी फुट्ने भए सबैभन्दा पहिला नेकपा फुट्छ, त्यसपछि कांग्रेस, अनि मात्रै हाम्रो पालो आउला ।’
यसअघि राईलगायतका नेताहरूले समाजवादी पार्टी फुटाउन लागेको चर्चा चलेको थियो । बुधबार समाजवादी र राजपाबीच एकता भएको थियो । दुवै दलका शीर्ष नेताहरू एकताको सहमति पत्र तयार पार्न बैठक बसिरहेको बेला असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले पनि पार्टी फुटाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
समाजवादी र राजपाबीच एकतापछि नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नाम राखिएको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बिहीबार बिहान निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ताको निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीमा नेताहरूको पद बाँडफाँट भएको छैन । नेताहरुले लकडाउनपछि एकताका बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएका छन् ।